induku Glue yasungulwa ngochwepheshe German ukukhathazeka adumile "Henkel" ngo-1969. Lula okusungulile yasheshe sasimthanda amakhasimende, ngenxa isilethele impumelelo enkulu. ngalowo nyaka kuphela kwathiwa kudayiswa izinti bhiliyoni ingcina emazweni 121. Kusukela ngaleso sikhathi, abasebenzisi uthole indlela esheshayo futhi ahlanzekile glueing. Kwathatha iminyaka engaphezu kwamashumi amane, kodwa inhlaka ehhovisi unamathele kanye izibaya, amapensela, kuma-paper clip nezinye zasehhovisi uyaziqhenya lwendawo. Lokhu kunengxenye ekwenzeni lula ukusetshenziswa, ukusebenza kahle, ukuhamba, kanye nokusebenza umkhiqizo.
induku Glue iphathelene izinhlobo esiqinile anamathelayo. Yenzelwe gluing amakhadibhodi, izithombe, iphepha, nendwangu. Plastic nezezindlu induku Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Amadizayini akhe kungaba mnandi, esimnandi, elikhanyayo futhi eqinile. cap uphawu ivaliwe kalula kwelinye motion ngokuchofoza alandisa kuqhathaniswa omiswe ingcina kanye ukuhwamuka umswakama. Ukusonta indlela induku elise base, ivumela ukuba komzamo spin ikholomu futhi asuse ingcina.
Izinzuzo ingcina zisobala:
kalula zakhukhula nge;
glues ngokushelela futhi enokwethenjelwa;
Akukona deform evele kunenze nisondelane;
Ngenxa nezakhi ezithile zamakhemikhali, iglu induku displaces ehhovisi silicate glue.
induku Glue sisetshenziswa kabuthaka nangokuthula ungqimba nombala mncane, hhayi raspolzayas ngalé kwengaphandle ingcina. Ukuvumelana we induku uyakwazi ukusebenzisa umugqa ewumngcingo, futhi okuvulekile, phezu kwawo wonke ububanzi ububanzi induku. izakhiwo kokokunamathisela induku glue, kwenzeka kuzona ngokwazo kwesigamu somzuzu emva isicelo gluten, okuvumela isikhathi ukulungisa noma yimaphi amaphutha kule nqubo ye ngibopha imibhalo. Eliphezulu ingcina akufanele ibe izigaxa futhi Clumps, noma gluing iphepha is wetted futhi uzothola ukubukeka inobudlabha, nenduku ungavula ku into viscous.
Glue stick. isakhiwo
Zonke izinti ingcina wenza ngesisekelo non-enobuthi biopolymer polyvinylpyrrolidone (PVP) noma okuqinile futhi into kungekho nto enemibala emihle - polyvinyl acetate (PVA), ezisetshenziswa njengoba thickeners. Namatsisela kubo ngendlela efanayo, kodwa indlela yokwakheka ingcina PVP azigcina izakhiwo ingcina eside. Ngenxa humectant lichaza ekwakheni iqukethe glycerin yemvelo,
ukuhlinzeka ukusetshenziswa eside umkhiqizo kanye ngcono izakhiwo Yesigcilikisha. Wenza kube lula ukusebenzisa i-glue nge ungqimba elincanyana, ukunciphisa ukusetshenziswa yayo.
Glue induku ayiqukethe kumakhemikhali awuketshezi and zokwenziwa nodayi. Kuphephile ngokuphelele kwempilo yabantu. Ubuningi elikhulu anamathelayo inikeza kuyashesha futhi eqinile gluing izinto. Kulokhu, iphepha is elifakwe ngokulinganayo hhayi moisturized. I anemibala glue stick ungeze sombala obomvu noma oluhlaza, ukuthi emva iphele ungqimba ingcina iphele. Kuyinto ebonakalayo iphepha futhi usiza ukubeka izindlela ngokunembile futhi ngokunembile.
Nezibhulo ngoba twins: izinhlobo onobuhle
Amakhethini phezu grommet ikamelo - isixazululo stylish
Dispensers imikhiqizo okuxekethile. Element Gravimetric imikhiqizo powdery
Dance Pad: ukubuyekezwa, lokho kungcono, izici nezinhlobo
Kanjani ukubonisa nomzimba ephuma emzimbeni ngaso leso? Ukuhlanza amakhambi igazi abantu ekhaya
Izindlela Olungokoqobo yokufundisa
Umphakathi we Tver esifundeni kanye ndawo. Geography, idolobha, elingenamikhono izingalo kanye ifulege, imfundo, umlando
WeJubili wasebusika "iminyaka engu-95 amabutho zokuxhumana", "iminyaka engu-95 ukuhlola" futhi "iminyaka engu-95 intelligence lempi"
Inkantini we ikhabe ebusika: zokupheka, izindlela zokupheka kanye nokubuyekeza
Ukhilimu omuncu. Nge olujiyile ubisi, gelatin, ushizi
Izifo "selfie imilutha." Selfie - umkhuba othile omubi noma isifo?
Kuphi futhi kanjani ukuthola isimo yomkhaya omkhulu?